पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो, अब कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ। निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ र डिजेल र मट्टीतेलमा..
बजेट बनाउदै गरेको अर्थ मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रका ४ संस्थाको यस्ता छन् संयुक्त माग, के गर्लान् अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं। निजी क्षेत्रका चार संगठनले आगामी बजेटका लागि संयुक्त रुपमा सुझाब दिएका छन्। ब्याज दर घटाउनेदेखि कर छुटसम्मको माग उनीहरुले राखेका छन्। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर..
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वस्थित उद्योग विभागको भवनमा उद्योगमन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि एकल विन्दु सेवाकेन्द्र सुरु गरिएको बताए । मुलुकमा भ्रष्टाचार अझै पनि व्याप्त रहेको भन्दै मन्त्री यादवले भने,..
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बुधबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । उद्योग दर्ता, प्रवेशाज्ञालगायत विभिन्न आठ प्रकारका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने..
काठमाडौं। शिवम् सिमेन्टले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। कम्पनीले गत बर्षको भन्दा १३.०९ प्रतिशतले नाफा बढाएको हो। गत वर्ष कम्पनीले ९३..
काठमाडौं । सस्तो मूल्यमा सवारी साधानको खोजीमा हुनुहुन्छ ? तपाईले कुनै व्यापारीक फर्म वा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ कुनै कम्पनी दर्ता गर्नु भएको छ ? मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता..
हानमा पहिलो पटक महिला अध्यक्ष, सिर्जना राणा सर्वसम्मत
काठमाडौं। होटल संघ नेपाल हानको अध्यक्षमा सिर्जना राणा सर्वसम्मत चुनिएकी छिन्। हानको नयाँ अध्यक्षमा सिर्जना राणा र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विनायक शाह सर्वसम्मत चयन भएका हुन्। हानको इतिहासमै पहिलोपटक महिला नेतृत्व आएको..
व्यापार युद्ध अन्त्य गर्ने वार्ताका आधार चीनले भंग गर्‍यो : ट्रम्प
एजेन्सी । दुई देशबिच व्यापार वार्ता चुस्त रुपमा अघि नबढ्नुमा चीन नै दोषी रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आरोप लगाएका छन् । अमेरिका र चीनबिच व्यायार युद्धको अवस्था छ र..
नेपालबाट बंगलादेशले ९ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारलाई नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् बंगालादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेल/मटितेलको मूल्य बढाएको छ । हवाई ईन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्याँसको हकमा खुद्रा विक्री मूल्य यथावत राखिएको छ । पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ५०..
ग्यासको कमिशन बढ्यो, निगमले वार्षिक ९६ करोड खर्च गर्ने, कस्ले कति पाउने भए ?
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको नियमन गर्ने निकाय नेपाल आयल निगमले ग्यास व्यवसायीको कमिशन बढाएको छ। व्यवसायीको लगानी र खर्च बढेको आधारमा कमिशन बढाएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ‘विगत ४,..
बाँसबाट बनेको कपडा ल्याउँदै रामदेवको पतञ्जली, पाँच सय बढी शोरुम खोल्ने
काठमाडौं । बाबा रामदेव आयुर्वेदिक उत्पादनको जगतमा एउटा नयाँ उत्पादन ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । एक वर्ष पहिले स्वदेशी सिम लञ्च गरेर टेलीकमको दुनियाँमा कदम राखेका रामदेवले पतञ्जली बजारमा बाँसबाट..
डडेल्धुरा । वसन्त रितुको आगमनसँगै फुल्ने लालिगुराँस फूलको सदुपयोग नहुँदा लाखौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरका नोक्सान हुने गरेको छ । डडेल्धुरा लगायत देशभरका वनैभरी फुलेको लालीगुराँसका फूलको उचीत उपयोग हुन नसक्दा त्यतिकै..
काठमाडौं । अत्यावश्यक सेवामा हडताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने निर्णय गरी सो को जानकारी राजपत्रमार्फत गराउने भएको हो..
मस्को । चीन र फ्रान्सले ४० खर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीन फिङको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा सोमबार दुई देशबीच १५ वटा व्यापार सम्झौता भएका..
गलेश्वर। रघुगंगा गाउँपालिका–६ ठाडाखानीका जन्मजात दृष्टिविहीन खिमप्रसाद छन्त्यालको जीवन अत्यन्त कष्टकर रूपमा बितिरहेको छ । जन्मदै आँखाको दृष्टि गुमाएका छन्त्यालले जन्मेपछि सानै उमेरमा बुबाआमा पनि गुमाए । बाबुआमाको मृत्युपछि रोजगारीको खोजीमा..
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० ट्यांकर दुई दिनदेखि भारतीयमै रोकिए
भारतीय भन्सारले अनलाइन सेवामा समस्या देखिएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० वटा ट्यांकर रुपैडिया नाकामा रोकेको छ। अनलाइनमा समस्या आएको भन्दै ट्यांकरसँगै फलफूल र तरकारी बोकेका दर्जन बढी ट्रक पनि दुई..
भारुबारे भारतको शर्तः नेपाल ल्याउन पाइने, लैजान नपाइने
काठमाडौं । ठूला दरका भारतीय रुपियाँ (भारु) नोट प्रचलनमा ल्याउनेबारे नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतले ‘नाजायज’ जवाफ दिएको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कले २९ फागुनमा पठाएको पत्र अनुसार..
काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा १०५ व्यवसायको अनुगमन गरी कारवाहीस्वरूप २५ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विभागले बुधबार..
किन घट्यो सुनको भाउ दुई सातामै २६ सय रुपैयाँले ?
काठमाडौं। सुनको भाउ दुई हप्तामा प्रति तोला २६०० रुपैयाँले घटेको छ। फागुन ८ गते इतिहासकै महँगो ६३ हजार तीन सय रुपैयाँसम्म कारोबार भएकोमा त्यसयता लगातार घट्दा बुधबार ६० हजार ७००..
वीरगञ्ज । धान खरीद सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको नेपाल खाद्य संस्थान वीरगञ्जले भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएको छ । संस्थान वीरगञ्जले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू..
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै निजी क्षेत्रले १९ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख १२ हजार ५०० बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले अगाडि सारेको..
कोकाकोलाको नयाँ योजना दैनिक १० हजारको रिचार्ज र ग्यालेक्सी नोट ९ जित्न सक्ने
काठमाडौं। कोकाकोला नेपालले ‘स्प्राइट डबल डोज,रिफ्रेस पनि रिचार्ज पनि’ योजना ल्याएको छ।यो योजनामा स्प्राइट, कोका–कोला, फान्टा लेमन, फान्टा ओरेन्ज र किन्ले सोडाको २५० एमएल सिसाको बोतल९आरजीबी० किनेर सहभागी हुनसक्ने कम्पनीले..
भ्यालेन्टाइन डे किसानका लागि गुलाब बिक्रीको अवसर, ३ महिनामा ३ लाख नाफा
भरतपुर। पश्चिमा संस्कृति भए पनि पछिल्लो समय नेपालमा प्रणय दिवस ’भ्यालेन्टाइन डे’ मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । प्रणय दिवसमा गुलाबको फूलको माग बढ्दो छ । प्रणय दिवसमा बढी प्रयोग हुने..
ओली सरकार आएपछि कुन बस्तुमा कति मुल्य बढ्यो ?
काठमाडौं । दुइतिहाइको बलियो सरकारले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । गत वर्षको पुसमा सरकार कांग्रेस नेतृत्वको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजानिक गरेको चालू..
एजेन्सी । संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको विश्वकै महँगो ६६० एकरको टापु ४६ करोड २० लाख डलरमा बिक्रीका लागि खुला गरिएको छ । यो टापुमा निजी तट, पाँचतारे होटल र अरेबियन..
नेपालमा प्रतिन्धित भारु नोट चलाउन भारतीय रिजर्भ बैंकले सूचना निकाल्दै
काठमाडौं । भारतले नेपालमा २ हजार, ५ सय र २ सय दरका नोट चल्न नदिने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरिरहेको बुधबारको ‘द प्रिन्ट’ अनलाइनले जनाएको छ । यसबाट..
बाँके । करिव ७ वर्षअघि ५ रुपैयाँबाट शुरु गरेको बचतले राप्तीसोनारीका अधिकांश महिला अहिले उद्यमी बनेका छन् । अहिले यहाँ महिला आफ्नै मेहनतमा रु १० लाख बढीको करोवार एक्लै गर्न सफल..
काठमाड । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीटेलको मूल्यवृद्धि गरेको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँको दरले वृद्धि गरिएको..
काठमाडौं । होटल, रेस्टुराँ तथा फस्टफूडमा लिइने सेवा शुल्क नलिने गरी रेस्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन ९रेबान०ले गरेको निर्णयको विरोधमा सो क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल..
Results 889: You are at page4of 30